MYU SHADAN: မိုင်းရှူးမှ အပျိုကြီး တစ်ဦးအား အစိုးရ တပ်မတော်မှ အဓမ္မ ပြုကျင့်
မိုင်းရှူးမှ အပျိုကြီး တစ်ဦးအား အစိုးရ တပ်မတော်မှ အဓမ္မ ပြုကျင့်
သျှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း မိုင်းရှူးမြို့နယ် မိုင်းအောတ် ကျေးရွာ အုပ်စု အတွင်း နေထိုင်သည့် အသက် ၃၂ နှစ် အရွယ် ဒေသခံ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဂျူလိုင် ၂၃ ရက်နေ့က အစိုးရ တပ်မတော်သား တဦး၏ အဓမ္မပြုကျင့် ခြင်းခံရသည်ဟု ဒေသခံများ ပြောပြချက် အရ သိရသည်။
မိုင်းရှူးမြို့ မြောက်ဘက် မိုင်းအောတ် ကျေးရွာအုပ်စုဝင် နမ့်ပါလမ်ရွာ တွင်နေ ထိုင်သည့် အသက် ၃၂ နှစ် အရွယ်(အမည်မဖေါ်လို) အမျိုးသမီး တဦးသည် ထမင်းဟင်းချက်ပြီး မိဘများအား လယ်တောသို့ ထမင်းသွား ပို့ရန် ပြင်ဆင်နေ ချိန် အစိုးရတပ်မတော် ခလရ ၉ မှတပ်သား ကျော်ကျော်ကို ဆိုသူက နေအိမ် သို့ရောက်ရှိလာပြီး အိမ်တံခါးပိတ် သေနတ်ဖြင့်ချိန်၍ ဂျူလိုင် ၂၃ ရက် နံနက် ၈ နာရီအချိန် ခန့်တွင် အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟု ဆွေမျိုးတော်စပ်သူတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ပြောသည်။
“နန်း ကို အဲဒီစစ်သားက သေနတ်တလှည့် ဓါးတလှည့် ထောက်တယ်။ အဝတ်မချွတ်မခြင်း၊ သူက အော်တော့ ဓါးနဲ့ လည်ပင်းကိုထောက်တယ်။ အခုသူက အရူးလိုဖြစ်နေတယ်။ ကြောက်ကြောက် လှန့်လှန့် နဲ့။ သူတို့ တပ်မှူးကိုသွားတိုင်တယ်။ လျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၅ သိန်းပေးဖို့ ရွာအကြီးအကဲ က တောင်းတယ်။ တပ်မှူးက တသိန်းခွဲဘဲပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျေအေး ပါစေ။ ထပ်မတိုင်နဲ့ ၊ သတင်းလဲ မထွက်စေနဲ့ လို့တောင်ပြောလိုက်သေးတယ်” ဟု အမည်မဖေါ်လိုသည့် အမျိုးတော်စပ်သူ ကပြောသည်။
မိုင်းရှူးမြို့နိုင်ငံရေးပါတီအသိုင်းအဝိုင်းက အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူအမျိုးသမီးအား ကျန်းမာရေးကုသမှု ရရန်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုစုပျိုးထောင် မှုရရန်၊ ပြစ်မှုကျူး လွန်သူအား တရားဥပဒေအရ ရင်ဆိုင်ရရန် အတွက် ကြိုးပမ်းနေသည်ဟုလည်း မိုင်းရှူးမြို့ ကျားခေါင်းပါတီဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
မိုင်းရှူးမြို့ မြောက်ဘက်ရှိ မိုင်းအောတ်ကျေးရွာအုပ်စုသည် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီအား ထောက်ခံရန် ဒေသခံ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့မှ စည်းရုံးနိုင်သည့် ကျေးရွာများဖြစ်သည်ဟု ကျားဖြူပါတီဝင်ဟောင်း တစ်ဦးကလည်း ပြောသည်။
၂၀၁၁-၁၂ ခုနှစ်က အဆိုပါဒေသအတွင်းရှိ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်များအား အစိုးရတပ်မ တော်တိုက်ခိုက်စဉ် စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်အလူးအလဲ ခံခဲ့ရသည့် ဒေသလည်းဖြစ်သည်။
Posted by myu shadan at 8:45 PM
CHAOS Combat Copters HD No.1 v6.3.5 APK (All Andro...
Garai ndung shi yang latsawn ai Manau Poi
လူဦးရေ ၅၁ သန်းကျော်တွင် ပြည်ပရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလု...
ဖားကန့်တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်း၍ အိမ်ခြေ ၃၀၀ေ...
လီဆူလူမျိုးများကို ပြည်သူ့ စစ်ထဲသို့ ဝင်ရန် လာရောက...
တောနင်း လာသည့် အစိုးရ တပ်မတော် စစ်ကြောင်း SSPP/SSA...
သမ္မတနှင့် နိုင်ငံရေးမဆွေးနွေးခဲ့ဟု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ခ...
မြစ်ကြီးနား လိုင်ဇာ ကားလမ်း ဗမာစစ်တပ်နဲ့ကားသမားေ...
ဖုန်းသမားတွေအတွက် servicerမှာ နာမည်ကြီး အသုံးဝင်းတ...
ဖုန်းထဲမှာCCTV Camera မိမိဖုန်းထဲ့ကနေ ကြည့်ရှူလို့...
Racing 3D: Asphalt Real Tracks Mod APK Version1.3 ...
လိုင်ဇာ၏သဘောထား သင့်လျော်သည့် တောင်းဆိုချက်ဟု ဒု-...
2014 Miwa Mung Wunpong Manau Poi Sumla Ni (3)
2014 Miwa Mung Wunpong Manau Poi Sumla Ni (2)
Easy Uninstaller Pro - Clean v2.2.9 APK
ဖုန်းကနေပြီး Youtube ထဲ့မှာ MP4, MP3 ဒေါင်းရန်TXD ...
ဖားကန့် လုံခြုံရေး စိတ်မချရသေး
ဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာ Facebook Account ပေါင်းများစွာကိ...
အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးပြီး ၅ ရက်အတွင်း အသက်ဝင်...
တိုင်းရင်းသားများ တောင်းဆိုသည့် ဖက်ဒရယ်မှုကို အစိုး...
Hpyen la ngu ai gaw Mung shawaamagam gun rai ra ...
2014 Miwa Mung Wunpong Manau Poi Sumla Ni (1)
Kahkum siaakyu Nang sha yu jang chye sai 南瓜的营养价值...
Ginsa ana htang maja ladat 10 10 种防癌措施
Jahtuk sha n jo ai simai nkau 几种错误的食物搭配　致使食物失去营养价
Android Root ရှိတဲ့ဖုန်းတွေအတွက် Internal Memory ထ...
Internet Download Manager (IDM) v6.21 build3With...
မြန်မာ့ ပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ တပ်မတော်ကို ဂျွန်က...
သူခိုးတို့၏ ဘဏ်တိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း အပိုင်း(၁)...
အနည်းဆုံးလုပ်ခ ၆၅၀၀ နှင့် ပြည်နယ် တိုင်းအလိုက် လုပ...
3DFlow 3DF Zephyr Pro 1.009 Win (crack iND)
Aurora 3D Animation Maker 14.07.21 Multilingual
Aurora 3D Text & Logo Maker v14.07.21 Multilingual...
Subway Surfers LA Mod Version: 1.27.0 APK [Unlimit...
CCleaner v1.04.23 APK For Android
[FIXED] Decision2Version: 1.03 Mod APK Unlimited...
Wifi Password များကို Backup/Restore လုပ်ပေးမယ့် -...
Armored Aces Version: 1.0 Mod APK V1.0 Unlimited C...
အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးမည့် အဖွဲ့စာရင်း အတည်မပြ...
စစ်တပ် ခြိမ်းခြောက်၍ နမ့်ခမ်း ဒေသခံများ ရွာလုံးကျွ...
အပစ်ရပ်ရေးတွင် စကားအသုံးအနှုန်းပြဿနာမှာ အစိုးရက လို...
အပစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးပြီး လက်နက် ဖြုတ်သိမ်းရေး တောင်...
မိုင်းရှူးမှ အပျိုကြီး တစ်ဦးအား အစိုးရ တပ်မတော်မှ ...
လိုင်ဇာ ထိပ်သီးအစည်းဝေးမှ အခြေခံမူ (၁၀)ချက် ချမှတ်...
မွန်ပြည်သစ်စခန်းများသို့ မူးယစ်ဆေးစွဲလူငယ်များအား ...
NCCT နှင့် MPC လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် အလွတ်သဘောဆွေးနေ...
ကချင်ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို ရွေးကောက်ပွဲ အသိပညာ...
အစိုးရနှင့်ဆွေးနွေးမှု ပြဿနာပေါ်ပါက တိုင်းရင်းသားအဖွ...